Ny porofon'ny fanaovana vaksiny dia tsy maintsy miditra amin'ny lamasinina VIA Rail
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-dalamby » Ny porofon'ny fanaovana vaksiny dia tsy maintsy miditra amin'ny lamasinina VIA Rail
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny porofon'ny fanaovana vaksiny dia tsy maintsy miditra amin'ny lamasinina VIA Rail.
Ny fampiharana io politika tsy maintsy atao vaksiny io, mifanaraka amin'ny toromarika avy amin'ny Governemanta Canada, dia hanome fiarovana fanampiny amin'ny COVID-19, ary hahatonga ny fiaran-dalamby ho azo antoka kokoa, mba hahafahan'ny mpandeha manohy mandeha amim-pahatokiana.
30 Oktobra - Ny mpandeha 12 taona no ho miakatra miakatra amin'ny lamasinina VIA dia tsy maintsy mampiseho porofo momba ny vaksiny na fitsapana molekiola COVID-19 manan-kery.
30 Novambra - Ny mpandeha 12 taona no ho miakatra miakatra amin'ny lamasinina VIA dia tsy maintsy mampiseho porofo momba ny vaksiny feno (tsy ekena intsony ny fitiliana molekiola COVID-19).
Mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny Governemanta Canada, VIA Rail koa dia namolavola politika tsy maintsy atao amin'ny mpiasa ao aminy.
VIA Rail Canada (VIA Rail) dia manambara ny politikan'ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny fitsipika napetraky ny Transport Canada androany. Ny politikan'ny vaksiny fenon'ny Via Rail dia mitaky ny olona rehetra 12 taona no ho miakatra ao anatin'ny lamasininay mba hampiseho porofo momba ny vaksiny manomboka ny 30 Oktobra.
Mba hamelana ny fotoana hanaovana vaksiny tanteraka ny mpandeha dia hisy fe-potoana tetezamita iray volana ahafahan'ny mpandeha mandeha raha toa ka mampiseho fitsapana molekiola COVID-19 manan-kery ao anatin'ny 72 ora aorian'ny dia. Hifarana amin’ny 30 novambra izao io tetezamita io, ary aorian’izay dia tsy maintsy atao vaksiny tanteraka ny mpandeha rehetra vao afaka miditra amin’ny lamasininay.
"Ny fiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahoakantsika, ny mpandeha ary ny vahoaka dia mihoatra noho ny laharam-pahamehana lehibe indrindra, dia lanja fototra miorim-paka lalina VIA Railkolontsaina sy andraikitra izay iombonantsika rehetra,” hoy i Cynthia Garneau, Filoha sy Tale Mpanatanteraka. "Ny fampiharana ity politika tsy maintsy atao vaksiny ity, mifanaraka amin'ny toromarika avy amin'ny Governemanta Canada, dia hanome fiarovana fanampiny amin'ny COVID-19, ary hahatonga ny fiaran-dalamby ho azo antoka kokoa, mba hahafahan'ny mpandeha manohy mandeha amim-pahatokiana."
Mifanaraka amin'ny Governemanta ny Kanadany takin'ny, VIA Rail namolavola politika tsy maintsy atao vaksiny ho an'ny mpiasa ao aminy ihany koa. Ireo izay tsy nanomboka ny fanaovana vaksiny hatramin'ny 15 novambra dia apetraka amin'ny fialan-tsasatra.
Na dia eo aza ireo politika henjana momba ny fanaovana vaksiny ao amin'ny fiaran-dalamby, ny fepetra hafa rehetra efa misy dia ampiharina amin'ny VIA Rail ho setrin'ny COVID 19 dia mbola manankery. Anisan'izany, ankoatry ny hafa, ny fitakiana ny fanaovana saron-tava amin'ny lamasininay, ary ny fisavana ara-pahasalamana alohan'ny hidirana ho an'ny mpandeha tsirairay.